Chii chinounza Twitter kuecommerce? | ECommerce nhau
Hapana anofungira kuti masocial network ave chombo chine simba kuburikidza nevanhu vari kusangana nekugovana nhau. Asi izvo vamwe vashandisi vasingazive ndezvekuti masevhisi aya anosanganisira kutsigira zvido zvezvitoro zvepamhepo kana zvekutengeserana. Kune akawanda maratidziro aripo panguva ino, uye pakati peakanyanya kukosha ari Facebook kana Instagram uye chaizvo izvo zvatichazotaura nezvazvo muchinyorwa chino, inova Twitter.
Twitter isocial network iyo inobvumidza iwe kutumira yakajeka mameseji ehurefu hupfupi, iine huwandu hunosvika makumi maviri neshanu mavara (pakutanga 280), inonzi tweets kana ma tweets, iyo inoratidzwa pane peji reimba yemushandisi. Vashandisi vanogona kunyorera kune ma tweets evamwe vashandisi uye mune chero mamiriro acho chishandiso chinogona kubatsira zvido zvekambani yekutengesa yedhijitari.
Chimwe chezvikonzero zvekuchishandisa izvi zvinangwa ndechekuti ndeimwe yemasaiti nenhamba huru yevashandisi pasi rose. Iwe haugone kukanganwa kuti Twitter parizvino ine avhareji ye vanopfuura mamirioni e300 vashandisi. Ichi chinhu chaunogona kutora mukana kuona kuti ecommerce yako inopinda munzvimbo hombe yenzanga. Kunyanya kune iyo profile iyo vatengi vako kana vashandisi vanopa kuburikidza nehungwaru hwekutengesa zano isu isu ticha tsanangura muchinyorwa chino.
1 Twitter uye hukama hwayo nekutengeserana kwedhijitari
2 Ziva kwazvinobva
3 Wedzera kufarira mubhizimusi rako rekutengesa
4 Wedzera huwandu hwevateveri nguva dzose
Twitter uye hukama hwayo nekutengeserana kwedhijitari
Pasina mubvunzo, iyi mass social network yave nzira yakapusa, inokurumidza uye yakananga yekusvika vangangove vatengi. Kuti uzo ratidza chiratidzo chako, asiwo kuparadzira zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa zvaunotengesa online. Mupfungwa iyi, chokwadi chekuti ruzivo rwuri mukati maro haruna kurema semamwe midhiya ekutaurirana midhiya rinogona kukubatsira. Kusvika padanho rekuti vashandisi veiyi svikiro, nekungotarisa, vanogona kuverenga tweet uye voona kana vachifarira zvirimo kana kwete. Neichi chikonzero iwe unofanirwa kutarisira ruzivo iwe rwaunofumura mune ino svikiro.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti Twitter ndeyekudyidzana kushamwaridzana network kusiyana nevamwe. Kutaurirana pakati pevashandisi kwakanyanya kuyerera uye kwakananga, uye mune iyi kesi kunogona kubatsira hukama hwevatengi-kambani. Kuburikidza nateedzero ehunhu hwatinokufumura pazasi:
Inoisa rako rekutengesa zviri nani kwazvo kuti riwedzere kuzivikanwa uye kukosheswa pakati peveruzhinji. Unogona kuenda kure sezvaunoda uye kuti kutozosvikira makore mashoma apfuura zvaizoita kunge zvaisakwanisika chaizvo.
Imwe yemipiro yake yakakosha ndeyekuti iwe unenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitaurirana nevanhu Uye nekudaro haugone kutambisa simba rayo kusvika kuvanhu vazhinji kubva panguva ino.
Iyo inogona kukubvumidza iwe kuti uve ne kutaurirana zvakananga usingashandisi kune dzimwe nzira dzeruzivo mune izvo zvinoumba zviwanikwa zvine hunyanzvi zvaunazvo uye pasina kukubhadharira euro imwe chete. Nekudaro nenzira iyi, iwe uri muchinzvimbo chekukwiridzira imwe yeaya mashandiro kana mafambiro kuburikidza neino simba uye inoshanda pasocial network kudzivirira ako bhizinesi zvido mukati meako wega chikamu.
Kana iwe uchizoshandisa iyi pasocial network kuzadzisa zvinangwa zvako zvinokurumidza, iwe unofanirwa kuziva hunhu hwayo. Zviito zvavo hazvina kufanana nekumwe nzira dzechinyakare kana dzakajairika dzekutaurirana. Mupfungwa iyi, zano diki rinogona kuuya rinobatsira nderekuti kana iwe uchitengesa zvigadzirwa muchitoro chepamhepo, hauna rekodhi rekuti vatengi ndevapi sezvo isu tisingavone, saka unofanirwa kuedza tsvaga kuti ndivanaani mune dzimwe nzira.
Ehe, iwe unofanirwa kuziva, zvirinani zvishoma, kuti chimiro chemutengi kana mushandisi chakaita sei. Kusvika pakuti inogara iri inoshanda shanyira mamwe mapeji kuona kuti vanozviita sei pa twitter. Kuburikidza neakanakisa profiles pane ino social network uye kuti iwe unogona kuona pasina chero dambudziko kubva zvino zvichienda mberi. Ichi chiito chinogona kukupa iwe rakanyatsojeka zano reizvo zvichave zvinofadza kune vateveri vako, uye zvakare ichakubvumidza iwe kununura mamwe mazano ekugadzira anoshandiswa nemakwikwi ako uye ari kushanda uye kuti kusvika parizvino ungangodaro usina kufunga. Zvakanaka, inguva yekuisa iyi pfungwa mukufamba kuitira kuti mhedzisiro isatore nguva yakareba.
Wedzera kufarira mubhizimusi rako rekutengesa
Kune rimwe divi, zvinogona kuti kana iwe uri mutsva kuTwitter kana uri kutsvaga kuvaka huvepo hwepamhepo, zvinodikanwa kutanga nekupa vangangoite vateveri chimwe chinhu chavanogona kunzwa kuti chakabatana nechako. Imwe yeakanakisa zvirevo anosanganisira retweet inonakidza tweets yeakanakisa vatengi kana vashandisi. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchinzvimbo chekutarisa zvirinani ma hashtag mafambiro uye semhedzisiro yechiito ichi iwe unogona kuzvibvumira kupinda nekukumbira kune vangangoite vateveri kuburikidza nekuita zvisina kunangana navo.
Iyo nzira inobatsira zvikuru yekupa kuoneka, kwete chete kune yako yekutengesa mhando, asi zvinopesana uye nekuwedzera kune zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa zvaunotengesa panguva iyoyo chaiyo. Kusvika pachinzvimbo chekuti inovandudza kumisikidza nekuti mupfungwa iyi chiitiko chakangofanana nekumaka mabrands ayo, mushure mezvose, anotsvaga asingazungunuke kuisa mucherechedzo wayo mundangariro dzevatengi. Zvekuti meseji yako inogamuchira zvakanyanya kupfuura nakare.
Imwe yemabhenefiti ayo anowanzoitika ndeaya atichazokuratidza pazasi kuti iwe ugone kukoshesa panguva ino kana iri nguva yakanaka yekushandisa yakakosha pasocial network.
Inokupa iwe mukana wekusvika kune vanhu vazhinji kupfuura kuburikidza nechero imwe yakajairika kana yechinyakare system.
Inogadzira kuoneka kukuru kupfuura mamwe midhiya. Mupfungwa yekuti haugone kukanganwa kuti Twitter zvakare yakakosha pasocial network yeGoogle. Rangarira kutsanangura yako Tweets ine akanakisa mazwi akakosha kana iwe uchida kuti Google inongedze chimiro chako uye uve munzvimbo dzepamusoro dzeinjini yekutsvaga. Kunze kwezvo, zvinokurudzirwa kugadzira kushambadza neTwitter Ads kuti uwedzere kuoneka kwako Tweets.
Kuita macampaign emarudzi ese. Hapana mubvunzo kuti neiyi social network yehukosha hwakakosha iwe uchave unokwanisa kugadzira mishandirapamwe ine huru midhiya mhedzisiro. Shandisa maturusi kuti usarudze akanakisa mafomati epamushandirapamwe wepaTwitter uye gadzira inoteera Nemhedzisiro yakanangana nemhedzisiro iwe yaunogadzira mune yako online chitoro kana commerce kubva zvino zvichienda mberi.
Kukura kukuru kwevatengi vako kana vashandisi kubva panguva iyoyo. Zvese izvi nekuda kwema analytics iwe aunogona kukumbira nekushandisa kwe Twitter Analytics Uye kuti iwe unogona zvakare kubvunza pazvinhu zvakakosha zvakadai, sekudyidzana uye nhamba yevateveri. Pamusoro pazvose, zvinonyanya kubatsira mune izvo zvinoreva kune yepakati nepakareba nguva nekuda kwezvakanaka zvazvinoreva pakuvaka kuvimbika kwechiratidzo chebhizimusi kubva zvino zvichienda mberi.
Wedzera huwandu hwevateveri nguva dzose
Nepo kune rumwe rutivi, iwe haugone kukanganwa kuti iyi social network inotipa mukana we gadzira netiweki yevateveri yechiratidzo chedu. Tichiverenga pane zvinokwezva zvemukati zvevashandisi, isu tinokwanisa kukwezva huwandu hukuru hwevashandisi, uye nekuwana kuvimbika, tichigadzira pakupedzisira inesimba uye inokanganisa netiweki yevateveri.
Asi pakupera kwezuva, izvi ndizvo zvimwe zvezvibatsiro izvo ino simba network yekudyidzana inogona kukupa kubva ikozvino. Kunyangwe tichichengetera zvimwe zvinokatyamadza zvekupedzisira, senge mune anotevera matanho atinofunga izvozvi.
Iwe une rutsigiro rwakanakisa rwakagadzirirwa iyi network yemagariro kune vese vashandisi. Unogona kutora mukana nazvo pasina mutengo wezveupfumi pachikamu chako.
Iwe uchagara uchikurukura nevanhu vazhinji vanhu kupfuura iwe pakutanga paunofunga. Hazvishamisi kuti iyi ndiyo sisitimu inokuisa mukubatana nevazhinji vashandisi kana vatengi.
Iwe unogona kugadzira yako wega network yevateveri zvishoma nezvishoma uye kuti kuoneka kweako kushambadzira brand kuri kuwedzera kubva kune ese maonero maonero.
Ehezve, ruzivo rwevatengi runoda nzira dzakasiyana kubva kune dzakajairika uye ichi chingave chimwe chazvo.
Iri ibasa rinozivikanwa pasi rese uye nekudaro unogona kukwezva vamwe vashanyi kubva pakutanga. Pasina kutambisa zvese zviwanikwa izvo zvinokupa iwe mahara. Kusvika padanho rekuti zvichave zvakakodzera kupinza izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Chii chinounza Twitter kuecommerce?